OTÚ ọtụtụ ndị si na-abata ná nzukọ Jehova taa emeela ka ọ dị mkpa na a ga-arụkwu Ụlọ Nzukọ Alaeze, Ụlọ Mgbakọ, ụlọ akwụkwọ ebe nzukọ Jehova na-azụ ụmụnna nwoke na ụmụnna nwaanyị, nakwa Ọfis Ndị Nsụgharị. Nke a emeekwala ka ọ dị mkpa na a ga-arụ ihe ụfọdụ n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị iche iche. N’ihi ya, n’ọnwa Ọktoba afọ 2013, Òtù Na-achị Isi hiwere ngalaba ọhụrụ ga-eme ka a gbapụ ọrụ ise ụkpụrụ ụlọ na ịrụ ha arụ ọsọ, nakwa ịrụzigharị ndị nke a rụrụla arụ na ilekọta ha otú na-agaghị efu oké ego ma ọ bụ rie oge. Aha a kpọrọ ya bụ Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Ụwa Niile. Ngalaba a dị n’isi ụlọ ọrụ anyị dị na Bruklin, Niu Yọk. Ọ bụ Kọmitii Mbipụta nke Òtù Na-achị Isi na-elekọta ngalaba a.
Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze ná Mpaghara Dị Iche Iche n’Ụwa, bụ́ ndị e nwere n’alaka ụlọ ọrụ anyị ndị dị n’Ọstreleshia, Sentral Yurop, Saụt Afrịka, nakwa n’Amerịka nọ n’okpuru Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Ụwa Niile. Ọ bụ ngalaba ndị a na-ahụ maka ise ụkpụrụ ụlọ, ịrụ ha arụ, na ilekọta ha ná mpaghara ụwa nke ha nakwa ịhụ na a na-arụpụta Ụlọ Nzukọ Alaeze ngwa ngwa. N’oge gara aga, ọ bụ Kọmitii Na-ahụ Maka Iwu Ihe Owuwu n’Ógbè na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ná mba ụfọdụ. Ma, ná mba ndị na-abaghị ọgaranya, a na-esi ná ndokwa e mere maka mba ndị na-enweghị ego arụrụ ha nke ha. Ma ugbu a, e jikọtala ụzọ abụọ a ọnụ ka e nwee ike gbapụkwuo ọrụ a ọsọ.
E hiwere Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze n’alaka ụlọ ọrụ niile iji hazie ọrụ iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze na Ụlọ Mgbakọ ngwa ngwa. Ọ bụ Kọmitii Alaka ka ngalaba a ga na-akọrọ otú ọrụ ha si aga. Otu ihe magburu onwe ya n’ihe a a gbanwere bụ na alaka ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịhọpụta ụmụnna ndị ọrụ ha ga-abụ inyere ọgbakọ dị iche iche aka ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze na Ụlọ Mgbakọ.
N’ọnwa Eprel afọ 2014, nnukwu ọrụ ndị e ji n’aka karịrị narị abụọ na iri asaa. Ụfọdụ n’ime ha bụ Ọfis Ndị Nsụgharị iri itoolu, ụlọ mgbakọ iri atọ na ise, na narị alaka ụlọ ọrụ na iri atọ a na-arụ ọrụ na ha. Ụlọ Nzukọ Alaeze dịkwa oké mkpa n’ebe dị iche iche. E nwere ihe karịrị puku Ụlọ Nzukọ Alaeze iri na anọ a na-arụ ọhụrụ ma ọ bụ na-arụzigharị arụzigharị.
N’eziokwu, okwukwe anyị na-esikwu ike ka anyị na-ahụ ka ụmụnna anyị si ná mba dị iche iche, agbụrụ dị iche iche, na asụsụ dị iche iche na-abịakọta ọnụ soro na-arụ ụlọ ndị na-ewetara aha nsọ Jehova otuto ma na-ebuli ya elu. Otu nwanna aha ya bụ Dan Molchan, onye na-arụ ọrụ n’ọfis Kọmitii Na-ahụ Maka Ndị Na-arụ Ọrụ na Betel kwuru, sị: “Ihe a ga-arụ arụ ka dị ọtụtụ. Ọ bụ ya mere obi ji atọ anyị ụtọ na ụmụnna anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị na-echeta anyị n’ekpere ma na-enye onyinye iji na-akwado ọrụ a. Ma, ndị anyị kacha ekele bụ ndị nke wepụtara onwe ha na-arụ ọrụ a.”
N’ỌNWA EPREL AFỌ 2014, NNUKWU ỌRỤ E JI N’AKA KARỊRỊ 270 ỤFỌDỤ N’IME HA BỤ:
Ọfis Ndị Nsụgharị 90
Ụlọ Mgbakọ 35
Alaka Ụlọ Ọrụ 130
Ụlọ Nzukọ Alaeze dịkwa oké mkpa n’ebe dị iche iche. E nwere ihe karịrị Ụlọ Nzukọ Alaeze 14,000 a na-arụ ọhụrụ ma ọ bụ na-arụzigharị arụzigharị.
Ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Ime Ime Obodo
Lee vidio a ka ị hụ otú ìgwè ndị ọrụ ise si rụọ Ụlọ Nzukọ Alaeze abụọ n’ime abalị iri abụọ na asatọ.
mailto:?body=Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Ụwa Niile%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015053%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Ụwa Niile